विशेष चुनावकै मुखमा रातारात पार्टी परिवर्तन गरेर हार्नेहरु
Ujyaalo बिहिवार, मंसिर २८, २०७४ ०५:५२:००
सर्लाही, मंसिर २७ –दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा सर्लाही क्षेत्र नं. १ मा नेकपा एमालेका तत्कालीन केन्द्रीय अध्यक्ष झलनाथ खनाल पराजित हुनुभएको थियो । त्यतिबेला यो विषयले निकै चर्चा पायो । उहाँलाई पराजित गर्नुभएको थियो, माओवादीका उम्मेदवार शम्भुलाल श्रेष्ठले । नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य रहेका श्रेष्ठ पार्टीबाट टिकट नपाएपछि त्यसबेला रातारात एकीकृत नेकपा माओवादीबाट चुनाव लड्नुभएको थियो । अन्तत: उहाँले एमाले अध्यक्ष खनाल भन्दा झण्डै ७ सय बढी मत ल्याएर चुनाव जित्नुभयो ।
मुलुक संघीय ढाँचामा गएपछि श्रेष्ठले पुन : यसपाली पनि प्रतिनिधिसभातर्फ चुनाव लड्ने मनासय बनाउनुभयो । तर माओवादी केन्द्रले उनलाई टिकट दिएन । माओवादीले एमालेसँग गठवन्धन गरेपछि क्षेत्र नं. १ एमालेको भागमा पर्यो । टिकट पाउनुभयो एमालेका धु्रवप्रसाद गौतमले । त्यसपछि श्रेष्ठ पुनः पूरानै पार्टी कांग्रेसमा फर्किए । दुवै हातमा लड्डु भने झै श्रेष्ठलाई कांग्रेसले पत्यायो र टिकट पनि दियो । तत्कालै पार्टी सभापति एवं शेरबहादुर देउवाले पशुपक्षी विकास राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि दिनुभयो ।
अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा एमालेका केन्द्रीय अध्यक्षलाई पराजित गरेर चर्चित बनेका श्रेष्ठ यस पटक भने चर्चामा रहनुभएन । उहाँ यस क्षेत्रमा राजपाका प्रमोद साहसँग पराजित हुनुभयो । साहले स्थानीय स्तरमा आंकलन गरिएको भन्दै आश्चर्य ढंगले वाम गठवन्धन र कांग्रेसकाे गढ मानिएको क्षेत्रमा विजयी हासिल गर्नुभएको हो । कांग्रेसका उम्मेदवार श्रेष्ठ दोस्रो समेत हुन सक्नु भएन । एमालेका ध्रुवप्रसाद गौतम तेस्रो हुँदा श्रेष्ठ तेस्रो हुनुभयो । साहले २२ हजार ३६, गौतम २१ हजार ४ सय ६५ र श्रेष्ठले २० हजार ७५ मत प्राप्त गर्नुभयो ।
स्थानीय तह चुनावमा आफ्ना मान्छेले टिकट नपाएपछि राजपा नेपालका केन्द्रीय महामन्त्री जंगिलाल रायले पार्टी नै परित्याग गर्नुभयो । त्यसपछि उहाँले आफ्ना मान्छेलाई एमालेबाट टिकट दिलाउनुभयो र आफू पनि एमालेमा प्रवेश गर्ने बताउनुभयो । तर उहाँका निकटका व्यक्तिले विजय हासिल गर्न नसकेपछि राय तत्कालै एमालेमा प्रवेश गर्नुभएा । बरु उहाँ प्रतिनिधिसभामा टिकट हत्याउने तर्फ लाग्नुभयो । उहाँलाई कांग्रेसले टिकट दिने भएपछि एमाले प्रवेश नगरी कांग्रेस प्रवेश गर्नुभयो । तर रायले पनि पराजय बेहोर्नुपर्यो । रायलाई पूर्व सहपाठी एवं राजपा नेपालकै अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र राय यादवले हराउनुभएको हो । राय १० हजार दुई सय १५ मतको फराकिलो मतान्तरले पराजित हुनुभयो । महेन्द्रले २९ हजार १ सय ९१ मत ल्याउँदा जंगीलालले १८ हजार ९ सय ७६ मत प्राप्त गर्नुभयो ।
क्षेत्र नं. २ बाटै राजपा नेपाल सर्लाहीका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष दिनेश राय पनि पराजितह हुनेमा पर्नुहुन्छ । राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र रायले टिकट पाएपछि दिनेश राय रातारात माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्दै वाम गठवन्धनबाट टिकट लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिनुभएको थियो । यसक्षेत्रमा फरक–फरक पार्टीबाट चुनाव लडे पनि पहिले एउटै पार्टीमा बसेर राजनीतिक गरेकाले प्रतिस्पर्धा निकै रोमाञ्चक थियो । तर २०७० सालको निर्वाचनमा पनि निर्वाचित राजपा नेता महेन्द्र राय यादवले नै चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सफल हुनुभयो ।
चुनाव ताका पार्टी परिवर्तन गरेका माओवादी नेता रामेश्वर रायले भने चुनाव जित्नुभयो । उहाँ स्थानीय तह चुनावताका लोकतान्त्रिक फोरमको केन्द्रीय सह–अध्यक्ष पद त्यागेर माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्दै सर्लाही क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधी सभामा चुनाव लडेर विजयी हुनुभएको हो । टिकट लिनका लागि चुनावकै मुखमा माओवादीमा प्रवेश गरेका राजपा नेता शिवपुजन रायले भने निर्वाचन आयोगले पहिलो संविधान सभामा सदस्य रहँदा कुटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरेको भन्दै उम्मेदवारी खारेज गरेपछि प्रतिस्पर्धा चुनाव नै लड्न पाउनु भएन ।